Zvakanaka Kuti Unyore Peji Yepanhau Mukati Maminitsi Makashanu - Semalt Expert
Mushonga Wakanaka ndiyo purogiramu yePython inoshandiswa pakutsanangurira XML uye mabhuku e HTML. Inogadzira miti yemapuraneti uye inowanikwa yePython 2 nePython 3. Kana iwe une webhusaiti iyo isingagoni kuiswa zvakanaka, unogona kushandisa dzakasiyana-siyana dzakanaka - entsorgung zollikon 2019. Dheta yakabudiswa ichave yakazara, inogona kuverengwa, uye inogadzika inenge yakazara mhete-misa-misi uye yakareba-muswe keywords.
Sezvakaita BeautifulSoup, lxml inogona kusanganiswa ne html. parser module conveniently. Chimwe chezvinhu zvakasiyana-siyana zvepurogiramu iyi yepurogiramu ndeyokuti inopa spam kuchengetedza nemigumisiro yakanaka ye data chaiyo-nguva. Zvese lxml uye BeautifulSoup zviri nyore kudzidza uye dzinopa mabasa matatu makuru: kuumba, kufambisa uye kutendeuka kwemiti. Muchidzidzo ichi, tichakudzidzisa kuti ungashandisa sei BeautifulSoup kubata mavara emapeji ewebhu.
Danho rokutanga ndokuisa BeautifulSoup 4 kushandisa pip. Iyi purogiramu inoshanda pazvose Python 2 ne3. BeautifulSoup inopetwa sePython 2 code; uye patinoshandisa nayo nePython 3, inoshandurudzwa zvinyatsoenderana nehuwandu hwekupedzisira, asi kemo haina kuongororwa kunze kwekunge taisa full Python package.
Unogona kuisa muparadzi akakodzera, akadai se html5lib, lxml, uye html. parser. Kana iwe wakaisa pip, iwe unoda kutora kubva bs4. Kana iwe ukakotora iyo chinyorwa, iwe uchada kuitora kubva paraibhurari yePython. Ndapota yeuka kuti mutauriri we lxml anouya mumashanduro maviri akasiyana: XML parser uye HTML parser. Mushandisi weHTML haashandi zvakanaka nekare yePython; saka, iwe unogona kuisa XML parser kana HTML parser anorega kupindura kana kuti asingakwanisi kuiswa zvakanaka. Mushandisi we lxml anoenzaniswa nokukurumidza uye akavimbika uye anopa mhinduro yakarurama.
Shandisa BeautifulSoup kuti uwane mhinduro
Nema BeautifulSoup, unogona kuwana maonero epeji yewebhu yakada. Mhinduro dzinowanzochengetwa muBhuku reKiitwa Object uye dzinoshandiswa kureva zvinyorwa zvepa webpage zvakanaka.
Zita, Lizivo, uye Musoro
Unogona nyore nyore kubvisa mazita emapeji, mazano, uye misoro neBlackSoup. Iwe unotofanira kuwana kugoverwa kwepeji nekodhi. Kana imwe nguva inowanikwa, unogona kuverenga data kubva pamusoro uye pamisoro.
Tinokwanisa kufamba kuburikidza neDOM miti tichishandisa BeautifulSoup. Tags chaining zvichatibatsira kubvisa tsananguro ye SEO zvinangwa.
Kana matanho anotsanangurwa pamusoro apa apera, uchakwanisa kubata webpage text zvakanaka. Zvose izvi hazvizotori maminitsi mashanu uye zvinopikira zvibereko zvehutano. Kana uri kutarisa kuti ubvise demo kubva pamagwaro e HTML kana ma PDF, ipapo hapana BeautifulSoup kana Python ichakubatsira iwe. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kuedza HTML kurasa uye kuongorora matsamba ako webhusaiti nyore. Iwe unofanirwa kushandisa zvakakwana nemaitiro aScottSoup kuti utore deta yezvinangwa zve SEO. Kunyange kana tikasarudza lxml's HTML parsers, tinogona kutora maitiro ekutsigirwa kweScottSoup uye tinokwanisa kuwana mhinduro dzakanaka munyaya yemaminitsi.